ညောင်းနေလားသူငယ်ချင်းတို့ ~ စန္ဒကူး
ကျွန်မတို့ရုံးမှာ အင်္ဂါနေ့တိုင်းဆိုရင် Public Health က massage ယူတဲ့သူတွေက လေ့ကျင့်ခြင်လို့ လာလာနှိပ်ပေးတယ်။ ဘယ်တစ်ခုကိုရွေးမလဲဆိုတာ ပြောလို့ရတယ်။ (၂)ခုရွေးလို့ရတယ်။ သူတို့ကတူညီဝတ်ဆုံလေးတွေနဲ့ မိန်းကလေးဆို၊ မိန်းကလေးကနှိပ်ပေးတယ်။ ယောက်ျားလေးဆိုယောက်ျားလေးပေါ့.. တစ်ယောက်ကို မိနစ် (၃၀)လောက်တော့ ကြာတယ်။ ဘာတွေပါဘဲဆိုတော့
1. Foot Massage (ခြေချောင်း၊ ခြေဖမိုးများနှိပ်နယ်ပေးခြင်း)
2. Hand Massage ( လက်ချောင်း၊ လက်ဖမိုးများနှိပ်နယ်ပေးခြင်း)
3. Back Massage (ကျောပြင်တစ်လျှောက် နှိပ်နယ်ပေးခြင်း)
4. Stomach Massage (၀မ်းဗိုက်ကြော နှိပ်နယ်ပေးခြင်း)
5. Face Massage (မျက်နှာ နှိပ်နယ်ပေးခြင်း)
6. Arm & Shoulder Massage ( လက်မောင်းနှင့်ပခုံးကြောများ နှိပ်နယ်ပေးခြင်း)
7. Leg Massage (Front with Standing Knee) (ခြေထောက် အရှေ့ပိုင်းနှင့် ဒူး နှိပ်နယ်ပေးခြင်း)
8. Leg Massage (Back of Leg) ( ခြေထောက်အနောက်ဖက် နှိပ်နယ်ပေးခြင်း)
9. Message for Neck Pain & Headache ( လည်ပင်းနာသူများနှင့် ခေါင်းကိုက်သူများအတွက်)
10. Anti-stress chair Massage ( စိတ်ဖိစိမှုများနေသူများအတွက်)
သူတို့က သင်တန်းတောင်ပေးသေးတယ်။ အလကားဘဲ။ တက်ချင်တဲ့သူတက်လို့ရတယ်။ ကျွန်မကတော့မတက်ဘူး။ သူများနှိပ်ပေးတာကိုတော့သဘောကျတယ်။ သူများကိုတော့ မနှိပ်ပေးချင်ဝူး... အင်း တကိုယ်ကောင်းဆန်တာ...တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တာ...
Posted by စန္ဒကူး at 4:42 AM